Ithokomele, I-Tuck-Away, Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yasezintabeni - I-Airbnb
Ithokomele, I-Tuck-Away, Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yasezintabeni
Star Valley, Wyoming, i-United States
Kuyamangalisa ukuthi yini edolobheni elikhulu elingakwenzela lona. Yingakho sifuna wonke umuntu ajabulele indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe--iyindawo enhle ngempela, enokuthula yokuphumula, ukuphumula, nokubhala leyo ncwadi ubulokhu ufuna ukusebenza kuyo!
Gxumela ku-Jackson Hole ukuze uthole okungcono kakhulu ekudobeni, ekudleni nasekuthengeni.
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe ivalelwe ekhoneni lezintaba, kude ne-hustle oyithola kwenye indawo. Izihlahla ziyizungezile futhi utshani obusanda kutshala usiza ekugcineni izinambuzane eziningi zikude. Kunemibhede emikhulu engu-2, imibhede emibili engu-3, nosofa omusha uma udinga indawo eyengeziwe. Futhi, phakathi nehlobo, ungakwazi ukukhipha izinto zakho ngaphandle futhi ulale ngaphansi kwezinkanyezi.
Ayikho indawo ezungeze idolobha elikhulu--lena yingxenye engcono kakhulu! Kodwa awukho kude ngokwanele ukuthi kuzothatha ihora ukuba ufike emakethe eseduze ukuze uthole ukudla. Le ndlu itholakala kalula nje emizuzwini engu-10 ukusuka e-Thayne, imizuzu engu-20 ukusuka e-Alpine, nemizuzu engu-50 ukusuka e-Jackson Hole. Uzojabulela ukuba wedwa ngesikhathi seholide lakho.
Izivakashi zingangibamba noma nini nge-imeyili noma ngocingo. Sinomndeni ohlala nje phansi emgwaqweni uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo. Ngeke sibe khona uma ungena, kodwa uzoba nakho konke okudingayo.